यी हुन् माता लक्ष्मीको आशिर्वाद रहने ४ राशि !! - Nepali in Australia
July 9, 2021 autherLeaveaComment on यी हुन् माता लक्ष्मीको आशिर्वाद रहने ४ राशि !!
ज्योतिष अनुसार १२ राशि मध्य केहि राशि छन् जुन राशिका मानिस धेरै भाग्यशाली हुन्छन्। यी भाग्यशाली राशिमा सँधै माता लक्ष्मीको आशिष रहिरहन्छ। जसका कारण यी राशिका मानिसहरुको जीवनमा धन तथा मान-सम्मानको अभाव कहिल्यै हुँदैन। जान्नुहोस् यी राशिको बारेमा…
वृष राशि :शुक्र यो राशिको स्वामी हो। स्वामी शुक्रको प्रभाव सँधै यी राशिका मूल निवासीमा हुन्छ। वैदिक ज्योतिषमा शुक्र ग्रहलाई सुख, धन, वैभव र ऐश्वर्यको कारक मानिन्छ। यस राशिका स्वामी, शुक्रको शुभ प्रभावले यस राशिलाई प्रभाव पार्दछ। यस राशिका मानिसहरूलाई कहिल्यै धनको अभाव हुँदैन।
कर्कट राशि :कर्कट राशिका मूल निवासीहरूले धन कमाउने र धेरै विलासी जीवन बिताउने थुप्रै मौका पाउँछन्। यस राशिको मूल निवासीहरूले भाग्यको साथ पनि पाउँछन्। यस राशिका व्यक्ति धेरै मेहनती र दृढ संकल्पित हुन्छन्। यस राशिका जातकहरूमा सधैँ माता लक्ष्मीको आशीर्वाद रहिरहन्छ।
सिंह राशि :सिंह राशिका मानिस धेरै मेहनती र कुशल हुन्छन्। यी मानिस आफ्नो विलासी आवश्यकताहरू पूरा गर्न कडा मेहनत गर्छन्। यस राशिका मूल निवासीहरूमा नेतृत्व गर्न सक्ने कुशल क्षमता हुन्छ। यिनीहरु कुनै पनि काम गर्न डराउँदैनन्। यस कारणले यिनीहरु हरेक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सफल हुन्छन्।
वृश्चिक राशि :यस राशिका मूल निवासीहरूमा अत्यन्त धेरै धन कमाउने इच्छा हुन्छ। यी व्यक्ति धेरै परिश्रमी हुन्छन्। यिनीहरुलाई कुनै पनि समयमा आर्थिक समस्याले सताउँदैन।
March 2, 2021 March 2, 2021 auther
September 26, 2020 October 9, 2020 admin